फेरि सारियो नेकपा सचिवालय बैठक, किन डराउँदैछन् ओली ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
फेरि सारियो नेकपा सचिवालय बैठक, किन डराउँदैछन् ओली ?
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, कार्तिक ४, २०७५
काठमाडौं – पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि लामो समयदेखि सर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक आईतबार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको थियो । तर बैठक बिहान ११ बजे समेत बस्न नसकी स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि वरिष्ठ नेताहरूले सार्वजनिक आलोचना गर्ने गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने बैठक नै गरिरहेका छैनन् । बैठकमा सामना गर्न नसक्ने भएपछि सारिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आईतबार ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठक दशैँअघि पटकपटक समय तोकेर दशैँपछिसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
आईतबार बस्ने बैठकमा सरकारको समीक्षा र नेता माधवकुमार नेपालले राख्दै आएको असन्तुष्टिबारे छलफल हुने नेकपाले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय सरकारका कामलाई लिएर नेकपाका नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा विरोधको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
मन्त्रीहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भनेर नेकपाका सांसद र वरिष्ठ नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारमा रहेर काम राम्रो गर्न नसकेका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको चर्चा भइरहेका बेला नेकपाभित्र मन्त्रीहरू फेर्नेसम्मको छलफल हुने बताइएको छ ।
नेता नेपालको असन्तुष्टि र वामदेव गौतमलाई काठमाडौं ७ बाट उपनिर्वाचनमा उठाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । नेता नेपालले पार्टीको प्रदेश तहमा एकीकरण हुँदा आफू निकटका नेताहरूलाई पाखा पारिएको र कतिपय नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका थिए ।
वामदेव गौतमलाई काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर संसदमा ल्याउन पहल गर्नेबारे भएका गतिविधिबारे पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । गौतमलाई सांसद बनाउन भन्दै मानन्धरले राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमार्फत मानन्धरले राजीनाका लागि निवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, पार्टीभित्र र बाहिर उक्त कार्यको चर्को आलोचना भएका कारण औपचारिक रूपमा मानन्धरको राजीनामा गराउने बारे छलफल र निर्णय भएन भने गौतमलाई पनि काठमाडौं ७ मा नउठ्ने भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्न लगाइएको थियो ।
पार्टीभित्रको पदीय विवाद र मन्त्री फेर्ने चर्चाले आईतवारको बैठकमा चर्काचर्की हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय पार्टी र सरकारमा केपी शर्मा ओली एक्लिँदै गएका छन् ।